အရှင်ရာဇိန္ဒ (ရဝေနွယ် အင်းမ) Ya Wai Nwe (Inn​Ma) | The Noble Eightfold Path
အရှင်ရာဇိန္ဒ (ရဝေနွယ် အင်းမ) Ya Wai Nwe (Inn​Ma)	I was born on the 18th of June, 1969 at Inn Ma city, The’ Kone, Bago Division. My parents are U Thein Ni Sein and Daw Kyin Nu. At the age of ten, it was time for me to beanovist. A year after that, I becameanovist again then, titled as A Shin Ra Zhane Da. At the age of 20, I becameahonorific monk (ya hen).
I finished Pa Htar Ma Gyi Htan in 1990 at Ma Har We Thoe Thar Yone Parli University, Shwe Kyin monastery, Yangon. I later acquired the title of Thar Dana Da Sar Da Mar Seri Ya in 2000. It took me 10 years to finish Da Ma Sa Thi Ya Tan.
At the beginning of 1985, I started to send short stories to Pan Magazine. I continued till 1989 but all of my articles were rejected. I never gave up. Then, in an early morning of April, 1990, someone rushed to my door to tell me that my article was published atajournal called Myat Mingalar. Since then, I wrote articles, poems and moral stories for Myat Mingalar, Thi La Wa, Thit Sar, A Pa Ma Da, Myat Tha Di War Ti, Thu Ri Za, Movie Poems, Fashion Image, Faces, Popular, A Lin Than, Interveiw and Shwe Pyi Tan.
In 2001, Pyin Nyar Shwe Taung book store publishedabook I wrote called “Do you want to meet every life” and “The beginning of Golden Words”. In 2002 “Never Ending Travel Mate” was published and “Let’s Be Positivist” in the following year.I am now currently living at Thu Kar Pa Thi Pa Dar Thet Da Ma Ran Thi Yeik Thar, Kyaut Kong, Yankin T/S, Yangon.
ပဲခူးတိုင်း၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းမမြို့၊ အဖ ဦးသိန်းနီစိန်၊ အမိ ဒေါ်ကျင်နုတို့က ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၈)ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် ရှင်သာမဏေပြုသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ရှင်သာမဏေပြုသည်။ ဘွဲ့အမည်မှာ ရှင်ရာဇိန္ဒ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ပါဠိတက္ကသိုလ် ကျောင်းတိုက်တွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ရှစ်မိုင်၊ သဒ္ဓမ္မရံသီ ဆရာတော် ဘုရားကြီး အထံတော်၌ (၆)နှစ် သီတင်းသုံးခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ကို ရရှိသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ပန်မဂ္ဂဇင်းသို့ ၀တ္တုတိုစတင်ပို့သည်။ ၁၉၈၅၊ ၁၉၈၆၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ် အတွင်း ပေးပို့ခဲ့သော စာမူအားလုံး အပယ်ခံ့ရသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် မြတ်မင်္ဂလာ စာစောင်တွင် ဓမ္မဆောင်းပါး ပထမဆုံး စတင် ဖော်ပြခံရသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက်မှ “ဘ၀တိုင်းဆုံတွေ့ချင်ပါသလား” ဘာသာရေးစာအုပ် စတင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် မင်္ဂလာအတွေးများ စာအုပ်ဖြင့် ဓမ္မဗိမာန် စာပေဆုနှင့် ဆန်းလွင်စာပေ ပထမဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အမှတ် (၃) လမ်းမကြီး၊ သင်္ကန်းကျွန်းကြီး ရပ်ကွက်၊ အောင်စည်းခုံ စေတီလမ်း၊ ဓမ္မရဝေကျောင်းတိုက်၌ ပဓာနနာယက အဖြစ် သီတင်းသုံးလျှက်ရှိသည်။
This entry was posted on December 2, 2011 by Noble Kyaw. It was filed under ဆရာတော်ကြီးများ၏ထေရုပတ္တိ, English Translation .	→